संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ : डा. महत «
संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ : डा. महत
पोखरा-नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको सरकारले संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल प्रेस यूनियन कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा. महतले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संस्थागत रुपमा सरकारले भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
वाइडवडी लगायतका भ्रष्टाचारको विषयमा महासमितिबाट पारित गरेकोले भ्रष्टचारमा मुछिएका जो कोही नेताहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने सहमहामन्त्री डा. महतले माग गरेका छन् । उनले भने, “सरकार आफैले भ्रष्टचार गरेको छ, भ्रष्ट सरकारले छानबिन गछौंं भन्नु उचित हँुदैन । छानविन गर्ने संवैधानिक निकायले छानविन गर्न हामी माग गरेका छौं ।”
बालुवाटार जग्गा काण्डमा सरकारले उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नु हास्यास्पद भएको उनले टिपणी गरे । उनले भने, “प्रायोजित रुपमा सरकारले विपक्षी दलको नेतालाई जग्गामा, वाइडवडीमा सामेल हुनुहुन्छ भन्दै विषायन्तर गर्न खोजे पनि हामीले यसमा उचित छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका छौं ।”
संवैधानिक निकायहरुलाई कमजोर पार्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको उनको बुझाइ थियो । सदन र सडकबाट सरकारको रवैयाप्रति आफूहरुले खुलेर विरोध गर्ने सहमहामन्त्री डा. महतले बताए ।
पार्टीभित्रको गुटवन्दीलाई अन्त्य गर्न पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्नुपर्ने डा. महतको भनाइ छ । पार्टी भन्दा व्यक्तिले आफूहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दा पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व र गुट भएको उनको बुझाइ थियो । सरकारको कारणले गर्दा हाल चुनावी वर्ष भन्दा हाल ५० प्रतिशतले लगानी घटेको उनले जनाए । उनले भने, “देशमा अझै पनि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुन रुपमा भित्रिनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन, सरकारको कार्यशैलिले लगानीको वातावरण निर्माण हुन सक्दैन ।” बैंक व्याजदर बृद्धि हँुदा रज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका भातृ संगठनहरुको निर्धारित समय सकिएसँगै स्वतः समिति विघटन हुने हँुदा ६ महिनामा तदर्थ समिति गठन गरी नयाँ संरचनामा आउन उनले आग्रह गरे ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले पार्टीभित्रको गुटको अन्त्य विधानमै समेट्नुपर्ने अन्यथा यसको समस्या समाधान नहुने दाबी गरे । उनले भने, “धेरै वर्षदेखिको पार्टीको गुटउपगुटको अन्त्य गर्ने अब एउटै सूत्र हो, विधानमा समेट्ने । वडादेखि केन्द्रसम्म जसले जित्छ उसैले पार्टी चलाउने यो परिपार्टीको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई लिने र दिनेसँग सम्झौता गर्नतर्फ लाग्यौं भने कहिले पनि गुटको अन्त्य हुँदैन ।”
विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनताको सुरक्षा गर्न, पीडित जनता र विस्थापितका लागि
आधिकारिकता दाबी गर्न जसपाको उपेन्द्र पक्ष निर्वाचन आयोग जाने
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने
सरकारका लागि लकडाउन सत्ता जोगाउने कवचमात्रै बन्यो : कांग्रेस
सरकारले लकडाउनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बिरोध जनाएको
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छ : प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको
एमाले नेता खनाललाई उपचारका लागि दिल्ली लगियो
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन आह्वान गरेका छन् । स्वास्थ्य उपचारका
सर्वोच्च बारले तोक्यो एमीकस क्युरी
सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा माग गरिएको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) पठाउने निर्णय गरेको